News - Mashiinka Sandblastka otomaatiga ah ee marmarka qarxa, dhalada, saxanka birta, saxanka birta
1.Tani taxane ah ee mashiinka loogu talagalay diyaaradda nooca gudbinta otomaatikada ah ee mashiinka sandblasting, xawaaraha gudbinta inta jeer ee la heli karo oo lagu beddeli karo xakamaynta dijitaalka
Xawaaraha Sandblasting, tayada processing waa xasilloon, hawlgal fudud.
2. Qalabka shaqada ku dhaji suunka xamuulka inta lagu gudajiro hawlgalka, qalliinka sandblasting-na si otomaatig ah ayuu u dhammaystiraa, kaas oo aad u fudud uguna habboon.
3 Buufin radian qoriga lagu ruxruxo ayaa lagu qiyaasi karaa cabirka.
4 Buufiyo qoriga iyo santuuqa qoriga lagu buufiyo, waxaa la dhigi karaa iyadoo loo eegayo cabirka qalabka shaqada, wuxuuna sameyn karaa 720 digrii oo wareeg ah, sidaa darteed nooc kasta oo ka mid ah qalabka wax lagu duubo ee sandwich ah.
5.Waxa lagu qalabeeyaa mashiinka balaaran ee boodhka iyo aaladda iyo duufaanta duufaanka sifaha gaarka ah, waxay kala sooci kartaa xoqida iyo boodhka, waxay yareyn kartaa isticmaalka baabba'a, wasakheynta deegaanka. Abrasives si toos ah ayaa dib loogu isticmaali karaa.
6 Mashiinkaan taxanaha ah waxaa lagu qalabeeyaa 2-10 koox oo qoryaha buufinta ah, qori kasta oo buufis ah wuxuu leeyahay kontorool u gooni ah, oo ku qalabaysan 2-12 qoryo nadiif ah oo dharbaaxo leh, wuxuu yareyn karaa howsha shaqada ee ku lifaaqan walxaha ciidda.
7 Marka loo eego cabirka qaybta shaqada, qaabka iyo wax soo saarka iyo naqshadeynta ku habboon mashiinkan gaarka ah, mashiinkan waxaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa qalab boodh ah oo aruurinta boodhka ah iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha shaqadeeda.
Mashiinka oo dhan wuxuu korsadaa Siemens PLC xakamaynta isku dhafan, hawl fudud oo sahlan.
9 Saarista boodhka iyadoo la adeegsanayo sifeynta otomaatigga ee garaaca wadnaha, oo leh 9-16 walxo hufan oo sax ah, gabi ahaanba buuxisa shuruudaha ilaalinta deegaanka.
10. Isticmaalka qalabka ciidda: alumina sand (corundum sand), silicon carbide (carbide silicon cagaaran, carbide silicon madow)
muraayadaha dhalada, walnut silicon, ciidka xarkaha, walxaha caaga ah (sandka nylon), dhoobada dhoobada, birta birta, ciida birta, birta birta ah ee birta ah, aluminium kuul, iwm.
11.USUS: waxay ku habboon tahay dhoobada dhoobada, marmarka, dhalada, saxanka birta, saxanka birta, saxan aluminium, astaanta aluminium, qolofka martida kombiyuutarka, lafaha qolofka kombiyuutarka laptop, dhagax, iwm.